Isbitaalka MSF oo uu Khasaaro Ka soo Gaaray Dagaalkii Muqdisho - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Isbitaalka MSF oo uu Khasaaro Ka soo Gaaray Dagaalkii Muqdisho
02.04.2012 | Qeybta Guud, Taakulada Soomaalida
MSF waxaa ay cambaareyneysaa duqeyntii loo geystey isbitaalka Daynile ee magaalda Muqdisho taas oo dhacdey Jimcihii, 30ka Maarso. Dagaalka ayaa subaxnimadi ka bilowdey degmada Dayniile oo ku taala agagaarka caasimadda Musqdisho. Duqeynta ayaa burburisey xarunta daweynta degdegga ah ee isbitaalka iyo qeyb k atirsan woodka qaliinka. MSF waxaa ay isbitaalkan ka shaqeyneysey tan iyo sanadkii 2006 da.
Ma jirin wax dhaawac ah oo soo gaaray bukaanka isbitaalka oo 19 ah, shaqaalaha oo ah 36 iyo ilaalada oo gaaraya ilaa 12 qof. Dhamaantood waxey haatan duqeymaha kaga gabanayaan qeybta daawooyinka ee isbitaalka.
MSF waxey ugu yeereysaa dhamaan dhinacyada ku lug leh dagaaladan in ay ixtiraamaan dhexdhexaadnimada isbitaalka Dayniile
iyo sidoo kale dhamaan xarumaha caafimaadka ee ku yaala dalka Soomaaliya iyagoo ilaalinaaya amniga shaqaalaha iyo bukaanka.
MSF waxaa ay si joogta ah ugu shaqeyneysey Soomaaliya tan iyo sanadkii 1991 gii. Haatan, hay’adda waxey adeeg caafimaad oo la xiriira daweynta degdegga ah, talaalka iyo nafaqeynta ay ka bixisaa 13 xarun oo ay ku leehdahay dalka. MSF waxey sidoo kale gargaar u
fidisaa qaxootiga Soomaalida ah eek u sugan xeryaha Dhadhaab ee Kiinya iyo Dolow Ado, Itoobiya.
Blanca Thiebaut iyo Montserrat Serra waxaa laga afduubey Dhadhaab, Kiinya 13kii Oktoobar 2011 ka, iyagoo gargaar baniaadamnimo siinaya qaxootiga Soomaalida ah. MSF waxey ugu yeereysaa dhamaan Soomaalida; Jaaliyadaha, madaxda bulshada iyo gaar ahaan maamulada maxaliga ah ee maamulo goobaha ay ku afduubanyihiin asxaabteena ee gudaha Soomaaliya in ay sameeyaan wax walba oo ay awoodaan si ay
u fududeeyaan siidayntooda.
Tags: Daynile, Daynile hospital, MSF, Somalia, South Central Somalia